Mametraha vahaolana iray-fijanonana ny rafitra fisarahana tsy azo tanterahina amin'ny rindrina hatramin'ny 2004.
Sliding partition rindrina
Fikorontanana rindrina vita amin'ny rindrina
Fivoriana fitaratra azo alaina
Fanamafisana vahaolana saro-pady
Miaraka amin'ny 15 taona mahery amin'ny traikefa amin'ny aforitra sy
Fametrahana fisarahana sy indostrian'ny rindrina tsy azo esorina.
Ny tanjonay dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifantsika sy ny kalitao azo itokisana mba hahazoana antoka fa mahazo aina sy matoky ny entana ao amin'ny rindran-dry zareo ny mpanjifa rehetra noho ny fananana tsara. Manana endri-javatra maro izy ireo izay manome alalana sy fampiharana.
Namboarina ny vahaolana ho an'ny Windowsill / Mikasa amin'ny faran'ny mpanamboatra rindrina avy any Sina
Ahoana ny fomba hahatonga ny fifandraisana tonga lafatra amin'ny tontolon'ny tombo-kase raha misy varavarankely na sehatra eo amin'ny sisin'ny rindrina, manome vahaolana tsara ianao amin'ny faran'ny rindrina, ny vavahady Doorfold!Mpanamboatra sy mpamatsy: rindrina fizarazarana varavaranaNy Doorfold dia nanamboatra ny vahaolana ho an'ny Windowsill / Stage amin'ny faran'ny mpanamboatra rindrina avy any Sina
Biraon'ny fizaram-baravarana ao amin'ny takelaka Doorfold
Ny Doorfold dia manolotra rafitra maneran-tany maneran-tany sy ny rindrin'ny rindrina fitaratra sy ny rindrin'ny fitrandrahana vera ho an'ny serivisy, mifandraisa aminay amin'ny vahaolana tokana& Teny nindramina.
Various Panel matihanina safidy farany avy amin'ny Atrikasa Doorfold mpanamboatra
Doorfold Professional Various Panel farany safidy avy amin'ny Atrikasa Doorfold mpanamboatraKarazana farany ho an'ny tontonana: Fabric / Textile, Leather, HPL, MDF / Melamine, Paint Glass, Wood veneer / sary hosodoko, birao fotsy etc.Mpanamboatra sy ny Supplier: Doorfold fisarahana WallDoorfold : Ny za-draharaha sy matihanina Manufacturer ny Ambony Quality sy Higher Sound Insulation mitsingevana rindrina ny rafitra amin'i Shina Fampahalalana mikasika Based.More Contact: Mr.Wen Allen (The tompon'ny sy ny injeniera)Doorfold Best Various Panel farany safidy avy amin'ny Doorfold ny Atrikasa Company - Doorfold
rindrina fisarahana fitaratra vita amin'ny frameless ho an'ny birao
Famoronana fitrandrahana fitaratra tsy misy fotony ho an'ny birao. Ity vokatra ity dia ahitana ny famoahana entona manimba ny tontolo iainana. Afaka mitana andraikitra lehibe izany amin'ny fampihenana ny dian-tongotra karbonika. Ny Doorfold dia amboarina amin'ny alàlan'ny fitaovana sy fitaovana vaovao araka ny fironana farany amin'ny tsena farany& styles. Ny vokatra dia tsy misy fitaovana misy poizina toy ny mercury sy metaly hafa mampidi-doza ho an'ny tontolo iainana. Ahitana simika simika ihany no tompon'andraikitra amin'ny lokon'ny hazavana, izay tsy manimba ny mpampiasa sy ny tontolo iainana.
Tapitra ny rindrina fisarahana noforonina namboarina
fanaoPane akiaNy rindrina fisarahana dia handehandeha amin'ny alàlan'ny fizotran'ny famoronana vahaolana, avy amin'ny fifandraisana am-bidy, famolavolana, famolavolana, fanamboarana, fandefasana mankany amin'ny fametrahana.
Manome sketsa CAD sy 3D famolavolana 3D izahay. Manatanteraka dingana QC telo izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
Nanaraka ny fitsipi-pitondran-tena foana izahay ho an'ny fizotran-javatra famokarana hentitra, ny fitehirizana sy ny vidiny ho an'ny andaniny roa ary mitondra tombony ambony indrindra aminao.
Mankasitraka anao am-pitiavana izahay hitsidika ny orinasa anay hianatra momba ny anay Ny tontolon'ny akaniny SY Rindrina fisarahana azo modely fanamboarana sy famokarana.
Ny mpitantana ny tetikasa notendreny dia hitarika sy hitandrina ny tetik'asa sy ny fihazakazahana amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ireo loharano ilaina, handaminana ary hifandraisana aminao amin'ny anaran'ny mpiantoka ankapobeny;
Hodinihintsika ny teti-bola, ny drafitra ary ny sary ary ny fitsidihan'ny tranokala& fanombanana mba hamaritana ny ambaratonga sy ny filàna ny tetikasa hanolotra ny fomba tsara indrindra;
Ny mpitantana ny tetikasa notendreny dia hitarika sy hitandrina ilay tetik'asa ary hihazakazaka amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ireo loharano ilaina, handaminana.
Milentika tanteraka ao amin'ny tontolon'ny mpanjifantsika izahay. Saingy tsy hidina fotsiny amin'ny lafin-javatra manokana amin'ny sehatra isika; Izahay koa dia nandinika lalina ny fanontaniana toy ny hoe: "Inona no mampientam-po ny mpanjifantsika ho an'ny mpanjifantsika?" "Ahoana no ahafahantsika manosika ny fanirian'ny fividianana ny mpanjifa?" Ity no hataontsika aminao. Ity no fomba hamerenantsika ny tetik'asa ho ao anatin'ny tetik'asa.
Mianara momba ireo vokatra novolavolainay ho anao, toy nyrindrina fisarahana SYrindrina fisarahana finday, sns, ary hahatsapa ny famolavolana tsara izahay.
Lova faha-2 amin'ny lova any Dammam Saudi Arabia
NY TIANYUAN HOTEL (XIAMEN) -GRAND BANQUET HALL (P1 & P2)
Fiqing Yonghong Hotspring Resorts
Ny Doorfold dia orinasa iray izay mandoa saina be dia be amin'ny kalitaon'ny vokatra. Avy amin'ny fisafidianana akora, famolavolana, hamita ny fonosana feno, manatanteraka fifehezana tsara hatrany izahay raha manaraka ny rafitry ny famokarana iraisam-pirenena.
NYRindrina fisarahana azoNy vokatra dia voaporofo fa mahatanty ny fitsapana ny fotoana ary malaza be eo amin'ny mpanjifa izay tompon'ny trano fandraisam-bahiny, mpanao hatsaram-panahy sy ny sisa. Mandra-pahatongan'izany dia nandalo ISO 9001 ny fanamarinana kalitao iraisam-pirenena.
Miaraka amin'ny 15 taona mahery amin'ny traikefa ao amin'ny rindrina sy ny rindrina fisarahana ary ny indostrian'ny rindrina tsy azo esorina,Panel Acoustic mahazatra, Ny vavahadin-jorony dia nanangona traikefa sy fahaiza-manao manankarena mba hanomezana ireo mpanjifa manana vokatra tsara indrindra ary azo antoka fa mahazo serivisy tsara indrindra ny mpanjifa mba hanomezana ireo zavatra takiana manokana.
Tongasoa ianao hitsidika ny orinasa na ny fanontanianay momba ny vidin'ny vokatra toy nyrindrina fisarahanaary ny rindrina fisarahana finday amin'ny fotoana rehetra.